စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကို ဘယ်လို တွန်းလှန်မလဲ… – သတင်းထူး – Thadin Htoo
စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကို ဘယ်လို တွန်းလှန်မလဲ…
By Min Khant	 Last updated Aug 24, 2020
လူတိုင်း အမြဲတမ်း ကြုံနေရတဲ့၊ ကြုံလည်းကြုံဆုံနေရမယ့် အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ စိတ်ဖိစီးမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာလုံးမှာ ရာနှုန်းပြည့် မပျော်နိုင်ပါဘူး။ အမြဲစိတ်ဖိစီးကြပါတယ်။ ဖိစီးမှု ကြီးတာနဲ့ သေးတာပဲကွာခြားပါတယ်။ အမြဲတမ်း တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ပေါ်လာပါတယ်။ ခံစားမှုနဲ့ ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ လူ့ ရဲ့စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ အတော်ကြိုးစားရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော့်အတွေးထဲ ဝင်လာတာကတော့ Survival of the fittest ဆိုတဲ့ ဘဝမှာ လိုက်လျှောညီထွေစွာ နေနိုင်တဲ့သူ သာလျှင် ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သီအိုရီကို အကျဉ်းကောက်နုတ်တင်ပြချင်ပါတယ်။
ဒီ သီအိုရီကို အင်္ဂလိပ်လူမျိုး Darwin တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူက သက်ရှိတွေမှာ အရေအတွက် မျိုးပွားလာမှု နည်းတာ များတာဟာ သူတို့အနေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ စိတ်ခေါ်မှုကို မည်မျှ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်လဲ၊ မည်မျှဝင်ဆံ့နိုင်လဲ စတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ လိုက်လျှောညီထွေနိုင်တဲ့ အစုအဖွဲ့ကသာလျှင် ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အစားအသောက်နဲ့ ရာသီဥတုဒဏ်ကို မခံနိုင်သောမျိုးစိတ်တွေသည် မျိုးတုန်း သို့ သေဆုံးကြရမှာပါ။ ဒီသီအိုရီကို ကြည့်ပြီး ဘဝမှာလည်း မိမိဟာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေနေအရပ်ရပ်နဲ့ စိတ်ခေါ်မှုတွေကို ပါးနပ်တဲ့နည်းနဲ့ ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နိုင်ရင် စိတ်ခံစားမှုတွေ အထိုက်အလျောက် သက်သာသွားမှာ သေချာပါတယ်။
ဆိုလိုတာက ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့ အရာတွေကို ဘယ်လို တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ အချက်အပေါ်မူတည်ပြီး မိမိအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအနေနဲ့ ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ သုံးမလဲ (သို့) ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ဗဟုသုတရှိနေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာသင်ယူပြီး အသိပညာတိုးပွားရမှာပါ။ ဘဝမှာအကျိုးရှိရှိ နေဖို့ရတဲ့လူ့ဘဝကို တန်ဖိုးရှိအောင် နေထိုင်သွားကြရမှာပါ။ ဒီလိုဆို စိတ်ဖိစီးမှုကို လူတိုင်း မနှစ်မြို့တာ သိသိကြီးနဲ့ စိတ်ထဲဘာလို့ အဝင်ခံကြတာလဲ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့လည်း ဘဝဖြတ်သန်းမှုတစ်လျှောက် စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကို အတော်ခံခဲ့ရတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း အလုပ်ခွင်..၊ နေစဉ်နေ့ တိုင်း ဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်တွေမှာလည်း ထိုအရာတွေနဲ့ ကြုံဆုံနေစမြဲပဲ။ လူတိုင်းလည်း ဒီလိုပဲဆိုတာ နားလည်ပါတယ်။ ဒီလိုဆို စိတ်ဖိစီးမှုကို ဘယ်လိုပါးနပ်စွာ ရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာ အောက်ပါ အချက်လေးတွေကို လိုက်နာလိုက်ရင်..အတော်ထိရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။အရက်၊ ကဖီး၊ နီကိုတင်းဓာတ်ပါတဲ့ အစာများရှောင်ပါ…
still life with cigars and alcohol men’s history
ပထမအချက်ကတော့ ဘယ်လို အစားအစာတွေ စားသုံးသလဲဆိုတာနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ အရက်သေစာနဲ့ စိတ်ကိုနိုးကြွစေတဲ့ အစာတွေဖြစ်တဲ့ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီစတဲ့ Caffeine ဓာတ်ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကို လျှော့နိုင်သမျှ လျှော့ပါ။ ရှောင်နိုင်လေ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နီကိုတင်းဓာတ် (ဆေးရွက်ကြီးမှာပါတဲ့ ဥပဒ်ဖြစ်စေသောဓာတ်)။ ဒီအရာတွေသုံးဆောင်ခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု အလွန်ဆိုးရွားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ထိုအရာတွေက စိတ်ကို လတ်တလော နိုးကြွစေပေမယ့်.. စိတ်ဖိစီးမှု နဲ့ တွေ ရင် ပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။ မူးရစ်စေတဲ့အရာက ဘယ်အရာမှ မကောင်းတာသေချာပါတယ်။ သင့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်း လန်းဆန်းတက်ကြွမှုတွေကို ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။
Fit sporty women exercising and training in gym
ရိုးရှင်းပါတယ်။ လူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ လှုပ်ရှားမှု အလွန်လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုဖြစ်လာရင် ဆေးဝယ်၊ ဆေးထိုးဖို့ပဲ လူတွေက သိကြတယ်။ အားကစားရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို မေ့ထားတယ်။ ဒီလိုပဲ စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်လာရင် ပိုက်ဆံမကုန်ပဲ အကျိုးထူးစေတာက အားကစားလုပ်ခြင်းပါ။ လမ်းလျှောက်ပါ။ လှုပ်ရှားမှု တစ်နေ့ မိနစ် ၃၀ လုပ်ရုံပဲ သင့်ကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အားကစားလုပ်တာနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကို ဘယ်လိုသက် ရောက်လဲဆိုတာကတော့… စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်လာရင် လူ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ဖိစီးမှု ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ပါတယ်။
ထိုဟော်မုန်းတွေက Adrenaline အက်ဒရီနယ်လင်နဲ့ cortisol ကော်တီဆိုးလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ထိုဟော်မုန်းတွေက စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါ..နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်မှုနဲ့ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို ပိုမိုတက်ကြွစေလို့ စိတ်ဖိစီးမှုကို ပိုမိုတွန်းအားပေးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အားကစားလုပ်ခြင်းဖြင့် စိတ်ကို ပုံမှန်ဖြစ်လာစေပြီး တည်ငြိမ်မှုရစေကာ စိတ်ဖိစီးမှုကို တွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အားကစားလုပ်လိုက်ရင် သက်သောင့်သက်သာဖြစ်လာပြီး အဖျားရောဂါလည်းကင်းပါတယ်။
Sleeping beautiful Asian woman, view from above
စိတ်ဖိစီးမှုရဲ့ အခြားသော လက်သည်ဟာလည်း အိပ်ရေးမဝမှုပါ။ အိပ်ရေးမဝရင် ပိုပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ပါဘူး၊ ပြီးရင်စိတ်တိုတတ်လာမယ်၊ စိတ်အားအင်ချိနဲ့ပြီး ပိုမိုစိတ်ဓာတ်ကျလွယ်စေပါတယ်။ အခြားသော ဆေးဝါးဓာတ်စာ သုံးဆောင်တာထက်.. သဘာဝကပေးတဲ့ အိပ်စက်မှုကိုလည်း အထူးအလေးထားသင့်ပြီး တစ်နေ့ကို ၇-၈ နာရီအထိအိပ်စက်သင့်ပါတယ်။ အိပ်ရေးဝရင် လူလည်းလှ စိတ်လည်း ပျော်ရွှင်နေပါတယ်။ ညမအိပ်ခင်အရက်နဲ့ အခြားသောစိတ်တက်ကြွစေတဲ့ အစားအစာများကို ရှောင်ရှားပါ။ ကော်ဖီတို့ လက်ဖက်တို့ မစားသင့်ပါဘူး။ မအိပ်ခင်အလုပ်တွေကို ဖိမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒါမှ ဦးနှောက်ကို အနားပေးရမှာ အပြည့်အ၀ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
မအိပ်ခင် နွားနို့ ပူပူလေးသောက်တာတို့.. ရေချိုးပြီး ကိုယ်လက်သန့်စင်တာ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ရှုပ်တဲ့အရာတွေ မတွေးမိဖို့ပါ။ ပုံမှန်အိပ်ချိန်သတ်မှတ်ပါ။ ဥပမာ ည ၁၀ နာရီဆို ပုံမှန် ၁၀မှာ အိပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။ ဒါမှ မိမိရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်း အသားကျစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့အိပ်ချိန်တစ်မျိုး နောက်နေ့ တစ်မျိုးဆို ပိုပြီး အခက်ခဲဖြစ်စေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ စက်တစ်လုံးလိုဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
၄။ မိမိခင်မင်ရသူကို ရင်ဖွင့်ပါ…
Candid friends seated at the park talking to each other. Girlfriends speaking in conversation outdoors
မိမိခံစားရသမျှ မိမိတစ်ယောက်ပဲ သိတယ်ဆိုရင် ပိုပြီး ဝန်ပိနေသလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်စိတ်ထဲ မွန်းကျပ်နေပြီး ပိုစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိအားထားရတဲ့ သူကို ရင်ဖွင့်ပြီး စိတ်ဖြေဖျောက်ပါ။ ဒါမှာ မိမိလည်း စိတ်သက်သာရရှိမှာ သေချာပါတယ်။
မိမိတစ်ယောက်တည်းပဲ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကို ခံစားနေရရင် မိမိအနေနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှု ကောင်းစွာလုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရင်ဖွင့်ပြီး အကြံဉာဏ်ရယူပါ။ ဒါမှ အကြံကောင်းတွေ ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊ ဆရာ၊ အသိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ရင်ဖွင့် အကြံဉာဏ်ရယူပါ။ ဒါမှ ပြဿနာရဲ့ အဖြေရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ထွက်ပေါက်ကို မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ရင်ဖွင့်မှုဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ မျိုသိပ်ထားမှုက မိမိစိတ်ကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပြီး ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ခင်မင်ရင်းနှီးရသူတွေနဲ့ ရင်ဖွင့်မှုလုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ထားပါက အကောင်းဆုံးပါ။
Close up of male hand showing sign of stoping, rejectioning. Education, freelance, business and communication concept. Caucasian male model indoors inviting, showing. Copyspace for ad.
Learn to say No. တစ်ခါတစ်လေမှာ စိတ်ပင်ပန်း ဖိစီးမှုများရတာဟာ အမြဲ တစ်ပါးသူ အကူအညီလာတောင်းတိုင်း လက်ခံလိုက်မိတာ၊ မငြင်းမိလိုက်တာကြောင့် မိမိမှာ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး ဖြစ်လာရတာပါ။ ပြောစရာရှိတာပြောပါ။ အားမနာပါနဲ့။ မိမိရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို ရှင်းပြပါ။
မိမိမကူညီနိုင်တဲ့ဟာကို မလက်ခံလိုက်ပါနဲ့။ ဥပမာသူငယ်ချင်းက စာဝိုင်းကူခိုင်းတယ်၊ မိမိအနေနဲ့ အထိုက်အသင့်လျှောက် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကသာ ကူညီပါ၊ တစ်ခုလုံးကြီး တာဝန်မယူလိုက်ပါနဲ့။ မိမိမှာလည်း အခြား တာဝန်ယူထားတဲ့ အရာတွေရှိလို့ ဖြစ်နိုင်ရင် မိမိအခြေအနေကို ပြောပြပြီး ငြင်းပါ။ ဒါမှသူတို့လဲကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကို သိလာမှာပါ။ ဆိုလိုတာက မိမိကိုဝန်ထုတ် ဝန်ပိုးမပိအောင်နေပါ။
ဒီထက်မက စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြေပျောက်နိုင်တဲ့ နည်းတွေရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ အချက် ၅ ချက်က မိမိအနေနဲ့လည်း အသုံးတည့်လို့ မဝေလိုက်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အားလုံး ဒီအချက်တွေကို ဖတ်ပြီး ကျင့်ကြံဖို့ မမေ့နဲ့ နော်..။ အားလုံးကံကောင်းကြပါစေ။
ဗီဇပြောင်း ကူးစက် မြန် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကို လွှတ်ကြောက် စရာ လိုလို့လား…
စစ်တွေ‌ဆေးရုံကြီး မှာ ကိုဗစ် လူနာတွေကို ကုသရင်း ကူးစက် ခံလိုက်ရတဲ့ ရှေ့တန်း သူရဲကောင်းမလေး ရေးတဲ့စာ…